I-China i-Procaine Benzylpenicillin eyomeleleyo ye-Injecti yeMveliso kunye neMveliso | Iqela leqela leTypt
Iprocaine Benzylpenicillin eyomeleziweyo yokufakwa inaliti
I-each vial iqulethe:
Iprocaillic penicillin bp ………………………, 000,000 iu
Benzylpenicillin sodium bp ………………… i-1,000,000 iu
Umgubo omdaka okanye omhlophe ongekho mhlophe.
I-penicillin yintsholongwane ebanzi engabonakaliyo eyenzeka ikakhulu kwiibacteria ezine-gram-positive bacteria kunye ne-cocci ezimbalwa ezingenayo i-gram. Ezona bhakteriya zibukhali yi-staphylococcus, streptococcus, mycobacterium tuberculosis, corynebacterium, Clostridium tetanus, actinomycetes, bacillus anthracis, spirochetes, njl. njl. ichemacokinetics emva kwenaliti yokutsalwa kwepenicillin, icothwa kancinci emva kokukhupha ipenicillin yi-hydrolysis yendawo. ixesha le-peak lide, uxinzelelo lwegazi lusezantsi, kodwa isiphumo kukude kune-penicillin. Kuphelela kwiintsholongwane ezinomdla kakhulu kwi-penicillin kwaye akufuneki zisetyenziselwe ukunyanga usulelo olunzulu. emva kokuba i-penicillin kunye ne-penicillin sodium (potaziyamu) zidityaniswe ngenaliti, uxinzelelo lwegazi lungonyuswa ngexeshana nje elifutshane, elinika iziphumo zokuthatha ixesha elide kunye nokuthatha amanyathelo ngokukhawuleza. isixa esikhulu senaliti ye-procaine penicillin inokubangela ityhefu ye-procaine.
Ipilisi yePhemacodynamics yintsholongwane ebulala iintsholongwane. Indlela yayo ye-antibacterial ikakhulu kukuthintela ukwenziwa kwe-bacteria peptidoglycan yentsholongwane. Iibacteria ezibuthathaka kwinqanaba lokukhula zahlulahlulwe ngamandla, kwaye udonga lweseli lukwinqanaba le-biosynthesis. phantsi kwesenzo se-penicillin, ukuvela kwe-peptidoglycan kuvaliwe kwaye udonga lweseli alunakwenziwa, kwaye ulwelwesi lweseli luye lwaphuka kwaye lwabhubha phantsi kwesenzo soxinzelelo lwe-osmotic.
I-penicillin yintsholongwane ebanzi engabonakaliyo eyenzeka ikakhulu kwiibacteria ezine-gram-positive bacteria kunye ne-cocci ezimbalwa ezingenayo i-gram. Ezona bhakteriya zibukhali yi-staphylococcus, streptococcus, mycobacterium tuberculosis, corynebacterium, Clostridium tetanus, actinomycetes, bacillus anthracis, spirochetes, njl. njl.
ichemacokinetics emva kwenaliti yokutsalwa kwepenicillin, icothwa kancinci emva kokukhupha ipenicillin yi-hydrolysis yendawo. ixesha le-peak lide, uxinzelelo lwegazi lusezantsi, kodwa isiphumo kukude kune-penicillin. Kuphelela kwiintsholongwane ezinomdla kakhulu kwi-penicillin kwaye akufuneki zisetyenziselwe ukunyanga usulelo olunzulu. emva kokuba i-penicillin kunye ne-penicillin sodium (potaziyamu) zidityaniswe ngenaliti, uxinzelelo lwegazi lungonyuswa ngexeshana nje elifutshane, elinika iziphumo zokuthatha ixesha elide kunye nokuthatha amanyathelo ngokukhawuleza. isixa esikhulu senaliti ye-procaine penicillin inokubangela ityhefu ye-procaine.
1. I-penicillin edityaniswe ne-aminoglycosides inokonyusa uxinzelelo lwamva lwebhakteria, ke ineziphumo zokuvumelanisa.
2. Iiarhente ezibambisa ngokukhawuleza i-bacteriostatic ezifana nee-macrolides, itetracyclines kunye neamide alcohols zinefuthe lokuphazamiseka emsebenzini we-bactericidal ye-penicillin kwaye akufuneki ukuba zisetyenziswe kunye.
3. Ii-ions zetsimbi ezisindayo (ngakumbi ubhedu, i-zinc, i-mercury), ii-alcohols, ii-iodine, iodine, ii-oxidants, iiarhente zokunciphisa, i-hydroxy compounds, inaliti ye-acid eglucose okanye inaliti ye-tetracycline hydrochloride ingawutshabalalisa umsebenzi wepenicillin, oku kululwaphulo-mthetho.
4. I-Amines kunye neepenicillins zinokwenza iityuwa ezinganyibilikiyo, eziguqula ukumiliselwa. Olu nxibelelwano lunokulibazisa ukufunxa kwe-penicillin, njenge-penicillin.
5. Kwaye ezinye izisombululo zeziyobisi (ezinjenge chlorpromazine hydrochloride, lincomycin hydrochloride, norepinephrine tartrate, oxytetracycline hydrochloride, tetracycline hydrochloride, b iivithamini kunye neevitamin c) akufuneki zidityaniswe, kungenjalo inokuvelisa ukungunda, ukuntywila okanye ukuhanjiswa kwemvula.
Isetyenziselwa ikakhulu ukosuleleka okungapheliyo okubangelwa yintsholongwane ebuhlungu ye-penicillin, njenge-pus kwisibeleko seenkomo, i-mastitis, ii-fractures ezintsonkothileyo, njl njl, ezisetyenziswa kwizifo ezibangelwa yi-Actinomycetes kunye leptospira.
Idosi enye, ubunzima bomzimba ngamnye kg nganye, ziyi-10,000 ukuya kuma-20,000 iiyunithi zamahashe neenkomo; Amacandelo angama-20,000 ukuya kwangama-30,000 eegusha, ihagu, iidonki kunye nethole; Amacandelo angama-30,000 ukuya kwangama-40,000 ezinja kunye neekati. kanye yonke imihla, kangangeentsuku ezingama-2-3.
yongeza inani elifanelekileyo lamanzi angabinayo inaliti ukwenza ukumiswa ngaphambi kokusetyenziswa.
1. Eyona ndlela imbi yokuphendula kukuphendula okungahambi kakuhle, okunokwenzeka kwimfuyo eninzi, kodwa imeko iphantsi. Ukuphendula kwendawo kuphawuleka nge-edema kunye nentlungu kwindawo yesitofu, kwaye inkqubo yenkqubo ye-urticaria kunye ne-rash. kwiimeko ezinzima, kunokubangela ukwethuka okanye ukufa.
2. Kwezinye izilwanyana, kunokubangela usulelo oluphindwe kabini lwethambo lesisu.
1. Le mveliso isetyenziselwa kuphela ukunyanga izifo ezingapheliyo ezibangelwa ziibhaktheriya ezibuthathaka kakhulu.
2. Iinyibilika kancinci emanzini. xa unxibelelana ne-acid, i-alkali okanye i-oxidant, ngokukhawuleza iya kuphulukana nokusebenza kakuhle. ke, inaliti kufuneka ilungiswe ngaphambi kokusetyenziswa.
3. Nika ingqalelo ukunxibelelana nokungahambelani kwamanye amachiza, ukuze kungachaphazeleka ukusebenza kwawo.
Amakati, iigusha, neehagu: Iintsuku ezingama-28;
Ubisi: iiyure ezingama-72.
Itywinwe kwaye igcinwe kwindawo eyomileyo.
Edlulileyo: I-Diminazene Aceturat kunye nePhenazone Granules yesitofu
Okulandelayo: IAlbendazole kunye ne-Ivermectin ngomlomo